Doorashada Tanzania - BBC News Somali
28 Oktoobar 2010
Image caption Taageerayaasha madaxweyne Jakaya Mrisho Kikwete
Iyadoo laba maalmood kadib ay shacabka Tanzania u dareeri doonaan goobaha codbixinta ee doorashada guud ee madaxtinimada, baarlamanka iyo goleyaasha degaanka, ayaa waxaa heegan buuxa la geliyey ciidamada amaanka.
Ciidamada ayaa ugu baaqey shacabka inay sida sharciga waafaqsan u codeeyaan, iskana fogeeyaan wax walba oo amaanka wax u dhimi kara.
Jasiiradaha Zanzibar oo Tanzania ka mid ah, oo lagu yiqiiney khalalaase ka dhaca mar walba oo ay doorasho dhaceyso ayaa sannadkna deggan, heshiis siyaasadeed oo asxaabta ay gaareen aawadeed.
Baaqa ka soo yeerey ciidamada ayaa ku soo beegmaya markii maalmo ka hor khalalaase dhex marey taageerayaasha xisbiga talada haya ee CCM iyo kuwa mucaaradka ee CHADEMA uu qof ku geeriyoodey.
Taliyuhu ciidamada booliska General Said Mwema ayaa sheegey in cid walba oo dembi gasha sharciga la hor keeni doono, iyadoon loo eegeyn xilkiisa iyo mansabka siyaasadeed ee uu hayo.
Hase yeeshee madaxda asxaabta siyaasadeed ee mucaaradka ayaa hadalka ka soo yeerey ciidamada booliska ku tilmaamey hanjabaad iyaga ka dhan ah , isla markaana ay hay’adama amnigu u adeegayaan xisbiga talada haya ee CCM.
Gen Said Mwema waxaa uu iska fogeeyey eedahaasi, waxaana uu sheegey in waxa keliya ee ay meesah u joogana inay tahay sugidda amniga ee qof walba oo dalka ku nool, isla markaana aaney dhan u xaglineyn.
Tanzania oo ah dal ku soo naaloonayey amaan buuxa tan iyo markii ay xornimnadeeda qaadatey 49 sanadood ka hor, ayaa hadana tan iyo 1995kii , waxaa jasiiradaha Zanzibar oo dalka qeyb ka ah soo wajahay qalalaase siyaasadeed oo mar walba oo ay doorasho dhaceyso ay jireen falal amni darro.
Balse xaaladu sannadkan way ka duwan tahay , kadib markii labada xisbi ee halkaasi ku xafiltama ee CCM iyo CUF ay gaareen heshiis awood qeybsi oo la filayo inuu soo afjaro mashaakilkii halkaa ka taagnaa.
Sheikh Fadhil Soragha oo ka tirsan madaxda golaha diinta ee Zanzibar ayaa sheegey in saansaanta nabadeed ee sannadkan jirta ay sabab u tahay wadatashi dhex marey shacabka reer Zanzibar oo ah inay meel iska dhigaan is-aamin la'aanta iyo rabshadaha, taana uu Ilaah ku garabsiiyey inay goobaha cod bixinta u dareeraan iyagoo gacmaha is haysta.
Doorashadan ka dhaceysa Tanzania aya ah tii afraad ee asxaab badan ay ku tartamaan tan iyo markii dalka laga hirgeliyey nidaamka demoqraadiyadda asxaabta badan horaantii 90kii, balse xib xisbiga talada haya ee CCM ayaa tan iyo waagaa guusha la hoyanayey.